ज्योति लाइफको आइपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन,फागुन २३ गते अगाडि नै खुल्ने (हेर्नुहोस् ) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:४८ Basanta Khanal	0 Comments	ज्योति लाइफको आइपीओ निष्कासन मिति
काठमाडौं : ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन भएको छ । ज्योतिको आइपीओ अब फागुन २१ गतेदेखि खुला हुने भएको छ । यसअघि कम्पनीले फागुन २३ गतेदेखि आइपीओ बिक्री खुला गर्ने आह्वानपत्र जारी गरेको थियो । तर, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको आग्रहमा आइपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन गरिएको हो ।
अब यो आइपीओमा फागुन २१ गतेदेखि फागुन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको कुल ६६ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसमध्ये ३ लाख कित्ता ३० हजार कर्मचारी र ३ लाख ३० हजार कित्तानै म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याइएको छ । बाँकी ५९ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ज्योतिको आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६६ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गर्नेछ । लगानीकर्ताले सि–आश्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् । यो आइपीओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले ‘केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ । हाल ज्योतिको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । आइपीओ बिक्री गरिसकेपछि पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ज्योति लाइफले १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जगेडा कोषमा ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल यसको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ (वार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४ रुपैयाँ ८१ पैसा छ ।
← माधव नेपाल: प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ
मन्त्री साहको आदेशमा गहुँबाली न’ष्ट गरी मेला लगाउने तयारी,राष्ट्रपतिले उ’द्घा’टन गर्ने ! →
जिन्दावादका लागि जुम्ला पुगे निश्चल
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२७ Basanta Khanal	0
कलेज पढ्दापढ्दै कसरी सुरु गर्ने सेयर लगानी ? भविष्यमा राम्रै हुन सक्छ है लाभ